Nabd Jire noqo oo Dhexgal labada Shariif "Albaabkii Rajada Somalia" (Faalo Xiiso leh) – SBC
Nabd Jire noqo oo Dhexgal labada Shariif "Albaabkii Rajada Somalia" (Faalo Xiiso leh)
Qoraa Soomaaliyeed oo soo bandhigay Buug lamagac Baxay, (Xuquuqda barakacaha Habeylihin)
Awaare! Hogaamiye shacbiyad leh! (W/Q: Cisman maxmud cali gooni)
Tahniyad ,Mudane Mohamed Abdulahi Khalif(Shine) & Marwo Ikran cabdisalan Cilmi Oo Meherkoda Ka Dhacay Nairobi.
Anigoo aad uga murugeysan masiibada ku habsatay hoggaanka halgankii dib u xureynta ayaan si hal haleel ah ku seexday, tiiyoo aaney hurdo fiicanba iga soo dhicin ayuu ii yimid haatuf, shaki iyo cabsi weyn ayuuna igu beeray.
Cabsida aan dareemay darteed baan riiraxyo tirtay, wejigana sacabkaan mariyey, hareeraha ayaan eeg eegay misana meel aan iga fogeyn oo horteyda ah ayaa waxaa dig ku soo yiri shimbir ii wada dhambaal ku sajilan baqshad.
Haddiiba baqshadii ayaan furay, waxaana ku jirey cajal CD ah oo ay dusha kaga qoran tahay “DAAWO SIRTA KHILAAFKA” waan yaabay, indhahaan markale sacabka mariyey, hadana dib baan u eegay si aan u hubsado inuu qoraalkani sax yahay iyo in ay indhaheyga yihiin kuwa beensheegaya, laakiin hubsaday cinwaankii cajalka.
Dabadeed maxaa dhacay…? Durba waan furay, waan shiday, daawashaan u galay, intaanan ka gudbin boggii 1-aad ee cajalka ayaa waxaa iga soo horbaxay codsi aniga igu socday oo u qornaa (FADLAN NOQO NABAD-JIRE OO DHAXGAL LABADA SHARIIF)
Waan sii eegay oo waxaa codsiga soo direy doolli yar oo intuu ka qaxay Muqdisho ku dhibaateysan duleedka xeebta Jasiira, misana rajo wanaagsan ka qabay heshiiskii Jabuuti.
Doolliga wuxuu aad uga walaacsanaa inuu ka sii qaxo meesha uu maciinka biday, ka dibna aniga oo qiimeynaayey xaaladdii ayaan aqbalay codsigii doolliga.
Waxaan isu diyaariyey inaan NABAD-JIRE noqdo oo aan dhaxgalo labada Shariif ee talada ka halaawday.
Si nabadda aan raadinaayo iyo xaalka sida uu yahay aan wax badan uga ogaado ayaan u sii dhaadhacay guntii hoose ee cajalkii, waan daawaday dhammaantii si qumaati ah, cajalka wuxuu lahaa qeyb 1-aad iyo qeyb 2-aad oo ka kooban jilliino kala gedisan.
Cajalku wuxuu ka bilaabanayey koox culimadda suufiyadda ah oo meel siyaaro ah ku digrinaya, cayaal ku cayaarayey meel iskuul ahaan jirtay iyo hooyooyin safaf dhaadheer ugu jirey goob caafimaad oo ay dhakhaatiir ka yihiin niman madmadoow oo wejiyo qalfoof ah leh.
Anigoo intii la yaaban ayuu cajalkii sii socday, waxaana horteyda yimid qeyb cusub oo anigii cajalka daawanaayey ka dhax muuqdo, (graphic content….) waan yaabay, waxaan gashanahay dhar cad cad, wejigana waxaa iigu xiran maro cad oo ay ku qoran tahay “WAXAAN AHAY NABAD-JIRE”
Waxaan bilaabay geeddigii aan ku baadi goobaayey sidii aan ula kulmi lahaa labaddii Shariif ee aan dhaxgali lahaa arrintooda.
Ugu horeyn waxaan ka soo bilaabay Shariif Shiikh Axmed waxaan iska soo xaadiriyey xafiiskiisii, markii aan u sheegay xogheyntii in aan ahay NABAD-JIRE doonaya inuu Shariifka la kulmo ayey ii sheegeen inuu jiro liis lagu qoro dadka doonaaya in ay Sheekha qaabilaan, liiskii ayaan isku qoray, waxaana ahaa qofka 1000-aad (kumaad) ee liiska ku qornaa, welina dad baa iga sii dambeeyey.
Maalmo ayey igu qaadatay in aan sugo la kulankii Shariifka, xogheyntiina warkeygiiba way diideen, anigiina maadaama aan balan ku soo galay in aan nabad ka dhaxdhaliyo labada Shariif iima furneyn jid kale oo aan ka ahayn inaan la kulmo,anigoo kaashanayaa allah
Ileen Soomaali laalaab kama dhamaadee,markii aan xaalka ku jahwareeray ayaan bilaabay inaan si laalaab ah ku raadiyo la kulanka Sheekha oo aan iska dhaafo liiska baas.
Qolka uu Shariif ku jirey wuxuu lahaa afar irdood oo mid walba ay jiho ku taalo, iriddii waqooyi ayaan kaga imid, balse waxaa safka igaaga soo horeeyey nin la ii sheegay inuu yahay ergayga Eritrea u fadhiya isbaheysiga dib u xoreynta, gadaashiisna waxaa taagnaa safiirka Iiraan u fadhiya Midowga Africa oo uu jeebkiisa ku jiro sawirka madaxweynihii hore ee ruushka Vladimir Putin, waxeyna horteyda meeshaasi taagnaayeen dhawr maalmood, waxaa loo sheegay inuu Shariif ku jiro hawl qaran oo aad u muhiim ah.
Dhankii qiblada markaan ku soo shiiday, waxaan iska soo xaadiriyey illinkii galbeed, dadka dhooban darteed waxaanba is iri mudaaharaad ayaa ka jira, waxeyna indhaheyga qabanayeen wasiirka arrimaha dibadda Yaman iyo kan Masar oo isla taagan, misana gunuunacaya, is-hiifaaya oo leh, “ma shakhsi Soomaali ah ayaan intaan ka badan u taagnaan karnaa” laakiin safiirkii Yaman baa ku jawaabay “anagaa dan leh”, Shariifkiina weli hawshiisii qaran ayuu ku jirey.
Halkiina waan ka soo quustay, ka dibna waxaan imid albaabkii koofureed ee xafiiska, meeshan waxaa joogeen niman sita calamaanta Kenya, Tanzania iyo Rwanda, waan yaabay,waxaan is iri shariif xasan toloow madaweyne miyuu noqday. Haseyeeshee waxaa halkaas iiga soo horeeyeen dad dhawr ah oo Soomaali ah, iyagu rajo beel ayeyba taagnaayeen oo bishiiba mar ayaa albaabkaasi koofureed ee xafiiska Shariif Xasan la furaa ayey igu yiraahdeen, bishana waa calaf oo qofka nasiib u yeesha ayaa ka galaaya.
Markii aan ka quustay sedaxdii albaab ayaan u dhaqaaqay albaabkii dhanka bari ku yaalay, waa albaabkii ugu dambeeyey ee aan isku dayi lahaa in aan Shariifka uga soo galo.
Albaabkani ma dad badneyn, waxaa taagnaa nin isugu keey sheegay inuu yahay Suudaani, wuxuuna usha u hayey nin indhoole ah oo Ugandhees ah, indhoolka Ugandhees wuxuu dusha ku xambaarsanaa Raysal wasaaraha Ethiopia Meles Zinawi oo ay afka ugu jirtay masaasad (caagadda caruurta la nuujiyo) oo uu dusha kaga sawiran yahay calanka Mareykanka, meel aan sidaas uga fogeynna waxaa taagneyd Agustina Mahiga oo cayaarsiinaya ninka dusha lagu waday, indhaha ayuu ka cayaarsiinayaa sida uu hooyooyinka caruurta uga cayaarsiinaya isagana wuu qoslaayay
Waxaan eegay Albaabkii waxaa ku qorneyd ALBAABKA RAJADA, markiiba waxaan istaagay halkii ugu horeysay ee albaabka, waan garaacay, waxaana iga furey nin xogheyn ah, markii aan u sheegay in aan ahay NABAD-JIRE doonaya inuu Shariifka la kulmo wuu isoo dhoweeyey, wuxuu ii gudbiyey qolkii Shariifka, waxaan soo galay qolkii Shariifka, misana Shariifka nin ajnabi ah ayaa wuxuu gudaha ku barayaa luuqadda Ingiriiska, wuxuuna doonayaa inuu qaabilaadda bilaabo marka uu barto wixii kula hadli lahaa madaxda safka ugu jirta. Shariifka waxaan u sheegay inaan muddo maalmo ah u joogay banaanka xafiiskiisa sidii aan ula kulmo, wuxuuna iigu cudurdaartay “walaaloow tarjumaanadii baan ka shakinay, waxaan go’aansaday inaan si koorso deg deg (Intensive Course) ah ku barto luuqadda Ingiriiska oo aan wax dambe la ii tarjumin, waana hawl qaran”
Waxaan ka codsaday inuu iga ogolaado inaan dhaxgalo isaga iyo Sheekhii Shariif ay iskhilaafeen, wuuna iga yeelay, laakiin wuxuu shuruud ka dhigay in heshiiska ay qeyb ka ahaato Eritrea Puntlnd hadii la doonaayo in uu meel maro
Waxaan la fajacay inta dhib ee aan u maray Shariifka la kulankiisa iyo inta dimpolaasiyiin banaanka u taagneyd iyo … luuqadda Englishka.
Sidii ayaan kaga soo ruqaansaday dhankii Xafiiskiisa, waxaana iska soo xaadiriyey Xaruntii Sheekh Shariif si aan ula kulmo isagana oo aan uga raadiyo nabad.
Markii aan imidba waxaan xogheyntii u sheegay in aan ahay NABAD-JIRE doonaaya inuu Sheekha la kulmo, layma daahine waa la ii gudbiyey, waxaana ugu soo galay qolkii uu ku jirey.
Weji furan ayuu igu qaabilay, waxaa qolka kula jirey nin Carab oo gashan koofid uu ku sawiran yahay calanka dowladda Qadar, carabku wuxuu Sheekha tus tusaayey Album sawiro ah oo ay ku jiraan madaxda reer galbeedka iyo xulufadooda Carabta.
Albumka korkiisa waxaa ku qornaa qoraal English ah oo u dhignaa ”You are either with us or with them”
Sheekh Shariif ayaan codsigeyga u bandhigay, laakiin wuxuu igu dhahay “haddii aad ka soo dhameysato Agustine Mahiga anaga waxba kama qabno, nabadda waan kaa qaadanaynaa”
Qeybta labaad ee cajalka waxey ka bilaabaneysay Qanyare iyo Muuse Suudi oo taleefoon ku sheekeysanaaya.
Qanyare oo la yaabay khilaafka ka dhax aloosmay labada Shariif ee isaga iyo asxaabtiis kol hore ka qabsatay Muqdisho ayaa taleefoon ku wacay Muuse Suudi wuxuuna leeyahay “Muuse ka waran wadaadkii iyo cayaalkiisa waxa ka dhax dhacaya, waan dareemayey in CIA aysan ku sabreyn in anaga nalaga adkaaday oo qura, hadeertan waxaan fahmay in dhamaan danley la wada yahay oo qof mabda’ lagu raacaay uusan jirin”
Muuse Suudi ayaa ugu jawaabay “Kuwaan armey na siraayaan oo aysan khilaafka runtooda aheyn” Qanyare oo khilaafka ku raaxeysanaaya ayaa intuu koob kafee ugu jirey soo qaaday si haaneed lehna u kabooday wuxuu yiri “Walle waa ka dhab, waaba xarfaan kuwan, anagaa fahmi weynay maahee waa raggedii…!!!”
Muuse Suudi wuxuu hadlakiisii ku soo koobay “Mineey xarfaan yihiin Bashiir Raage ayey isfahmi lahaayeen”
Qanyare oo ku raaxeysanayey hadalkii Muuse ayaa wuxuu la sara istaagay qosol dheer oo sababay in xildhibaano hurdaayey oo ay ka mid ahaayeen Salaad Cali Jeelle iyo Cumar Finish soo kacaan.
Jilliinka xigay qeybtan wuxuu ahaa Raiisal wasaarihii hore ee Soomaaliya Md. C/Rasaaq Xaaji Xuseen oo ku dul ooyaaya qabrigii Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Aadan Cadde dushiisa Allaah ha u naxariistee.
Aniga C/Rasaaq Xaaji Xuseen aqoon uma laheyn, laakiin waxaan weydiiyey “adeer maxaad halkaan ugu oyneysaa?” wuxuuna iigu jawaabay “ninkan wuxuu igala dhintay fure muhiim ah, markii uu noolaa waan hilmaansanaa, laakiin markuu dhintay ayaan soo xasuustay, hadeerna iima soo noqonayo”.
Jilliinka xigayna wuxuu ahaa nin Australian ah oo u shaqeeya hay’ad ka mid ah hay’adaha gargaarka oo duceysanaaya, wuxuuna leeyahay “Ilaahoow Soomaaliya nabad hasiin ilaa aan guri raaxo ka dhisto magaaladda Melbourne”
FILLIMKAN QEYB MUHIIM AH BUU LAHAA OO LAGU JILAAYEY MADAXTOOYADA.
Jilliinkan waa ay igu adkaatay in aan galo madaxtooyadda, waayo dhinicii aan is iraahdo ka soo gal waxaa qori kala soo jeeday askari AMISOM ah oo difaacanaya Madaxtooyada, irrideeda waxaa ku qorneyd Soomaali “No” Ugadhees iyo Burundi “Free”
Gudaha madaxtooyada waxaa ka socda hawlo kala duwan, qeybta ugu horeysa marka ganjeelka laga soo galo waxaa lagu tababarayey dhallinyaro Ugandees ah oo ku lebisan darees ciidan, waxaana la baraayey sida meelaha ay dadka rayidka ahku badan yihiin madaafiicda loogu garaaco, mar marna si baroobo ah ayey dhanka Suuqa Bakaaraha ugu tijaabinaayeen qoriga BM-ka.
Gadaashooda waxaa joogay saraakiil Soomaali oo Janaraalo ah iyo rag wasiiro ka ahaa TFG-dii Maxamed C/laahi Farmaajo, kuwaas oo cunto u karinaayey askarta AMISOM ta ah ee tababarka u socday.
Saraakiishaasi waxaan ka aqoonsaday General Ismaaciil Qaasim Naaji iyo Ismaaciil Buubaa.
Qeybtii xafiiska madaxweynaha ee uu fadhiisan jirey Madaxweyne Maxamed Siyaad Barre waxaa laga dhigay baar weyn oo ay ka cunteeyaan niman caddaan ah oo dharka ay ku lebisan yihiin ay ku qornayd CIA, FBI iyo MI6.
Dalabka qadada maqaayadaasi laga helaayey waxaa ugu qaalisnaa hilbo iigu muuqdo lugo iyo gacmo caruur ah oo dhaylo ah (hilib dad), kuwaas oo lagu iibinaayey qiimaha ugu sarreeyey.
Maqaayadan waxaa kookayaal ka ahaa Maxamed Maxamuud Axmed Tarsan, waxaana kabaryeeriyeyaal ka ahaa C/kaafi Hilowle.
Calooshaa i hurtay markaan arkay hilbihii caruurta oo lagu qadeynayo, waan yalaalugooday, balse ma hunqaacin.
Qeybtii hoyga madaxtooyadda oo ay ku jiraan Shiikh Shariif Shiikh Axmed iyo Farmaajo irideeda waxaa joogay C/xakiin Xaaji Fiqi
Gudaha qolka Shiikh Shariif iyo Farmaajo waxey aad ugu mashquulsanaayeen oo fiirsanayeen filimka kartuunka ah ee (TOM and JERRY), waxeyna ku murmayeen “anigaa JERRY ah iyo ma tihide anigaa ah”, waxaana aktooda fadhiyey Maxamed C/laahi Oomaar oo u tarjumaayey wixii hadba Mukulaasha iyo Dooliga filimka jilaaya ay iskula hadlaan.
Jilliinka iigu yaabka badnaa ee cajalkaasi ku jirey wuxuu ahaa qaar ka mid ah madaxda muqaawamada ee ku sugneyd gudaha dalka, waxey yeelanayeen shir deg deg ah, waxeyna ku shirayeen duleedka magaaladda Muqdisho iyagoo ka wada xaajoonaya hadladii ka soo kala yeeray labada Shariif
Qeybta ugu dambeysa filimka ayaa wuxuu ahaa meel u ek xerooyin ay ku nool yihiin dad qaxooti ah, waxaana ka muuqday dhawr qofood oo feero qaawan, macluulsan, misana daruufta heysa darteed aanu jirin mid u jeeda midka kale.
Dhinacyada Kaamka waxaa ku yaalay qabuuro ay ku sharaxan yihiin tabeelayaal hay’adeed, waxaana ku qornaa tilmaamo ay ka mid ahaayeen QABUURAHA WFP, QABUURAHA UNDP, QABUURAHA UNICEF, QABUURAHA MSF, QABUURAHA CARE INTERNATIONAL, QABUURAHA DRC, QABUURAHA JUUJ WA MAAJUUJ, QABUURAHA HUMAN RIGHTS-KA, QABUURAHA LOCAL NGOs iyo kuwo kale oo aad u farabadan.
Inta uusan dhamaan filimka ka sheekeynayey SIRTA KHILAAFKA waxaa jira tabeello weyn oo xayeysiin ah, waxaana ku qorneyd “WAA BEEC, WAANA KIRO” waxaana hoosta tabeelaha ku sawirnaa Soomaaliya oo loo kala gooyey sedax meelood, laba meel oo kiro loo rabo iyo meel beec ah.
Dhanka badda waxaa is daba taxnaa maraakiib la iigu sheegay in ay wadaan dadkii Soomaaliya u dhashay oo loo daabulaayo Jaziiradaha la kala yiraahdo (SILAC iyo QUUS) .
Ugu dambeyntiina waxaa ku qornaa isla baaqii uu doolliga diraayey oo ahaa NABAD-JIRE NOQO OO DHAXGAL LABADA SHARIIF.
Waxaan laba jibbaaray dadaalkeygii aan ku raadinaayey nabadda, anigoo is leh bal orodka badi ayaan raacay duulimaad, intaan cirka ku maqnaa ayaa meeshii aan ka duulay hortey baddii ku soo fatahday (dilaacday) dhulkiina bad ayuu noqday, meel aan ku soo dego ayaan waayey, aad ayaan u naxay, ka dibna naxdintii ayaan hurdadii kaga soo toosay.
Hal dhib baa jira, haddii aan hurdadii ka toosay ma hayo hawsheydii NABAD-JIRE-NIMO, haddaan hurdada ku laabtana ma leh dhul aan ku soo dego oo aan hawshii ku wado, dhulka aan soojeedka ku heystana kama maarmo, hawsha aan hurdada ku dhaxwadayna waa muhiim.
Akhristayaasha ayaan laga sugayaa jawaabta qormadan…?
Abwaan: Maxamuud Axmed Cabdibaydhabo
Abu dhabi/a UAE
Afeef: SBC masuul kama ahan fikradaha maqaalkan xambaarsan yahay waxay u gaar tahay qoraaga:
axmed maxamed faarax says:
Sxb ma fahmin xagee socdaa qoraalkan ina cabdibaydhabo